Sida looga saaro spamka WhatsApp | Forum Mobile
Daniel Terrasa | 08/05/2022 23:45 | Shabakadaha Bulshada, WhatsApp
Spam kaliya maahan wax laga xumaado. Waxay kaloo khatar ku noqon kartaa aaladahayada. Marka laga hadlayo WhatsApp, waxay noqon kartaa albaabka ugu fiican ee khayaanada iyo tuugada, kuwaas oo raadsada helitaanka xogtayada shakhsi ahaaneed iyo xisaabaadka bangiga. Qofna ma badbaado: dembiilayaashani waxay isticmaalaan habab khiyaano ah oo sii kordheysa oo tijaabinaya awooddayada ilaalinta. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado sida loo ogaado iyo in ka badan oo dhan tirtirto spam WhatsApp. Taasi waa waxa aan ka hadli doono xiga.
Sida la wada ogsoon yahay WhatsApp waa app-ka fariimaha la isugu diro ee bilaashka ah ee ugu caansan adduunka. Waxaa maalin walba isticmaala in ka badan 600 milyan oo qof si ay ula xiriiraan asxaabta, dadka la shaqeeya iyo qoyska. Si fudud iyo, mabda' ahaan, hab nabdoon.
1 Tani waa sida spamku u shaqeeyo WhatsApp
2 Sida loo aqoonsado spamka WhatsApp?
3 Ka jooji spamka WhatsApp
3.2 On macruufka
Tani waa sida spamku u shaqeeyo WhatsApp
Ku biir ereyga "WhatsApp spam" si aad u koobto dhammaan noocyada khiyaanada iyo hanjabaadaha kumbuyuutarka ee u adeegsada codsigan sida faraska Trojan ee taleefannadayada.
Hababka ay isticmaalaan spameriyeyaasha si ay u galaan qalabkeena waa kala duwan yihiin, inkastoo dhammaantood ay leeyihiin hal dhibic oo ay wadaagaan: waxay isticmaalaan khiyaano, oo leh kala-bax weyn ama ka yar. Tusaale ahaan, waxaa loo soo bandhigi karaa qaab fariimo iyo digniino ah, oo nagu martiqaadaya gujinaya xiriiriyeyaasha aan badbaadada lahayn ama iska diiwaan geli shabakadaha laga shakiyo. Mar kale ayaa nalagu booriyay Bixi macluumaad gaar ah, furaha sirta ah ama xogta gelitaanka dhammaan noocyada been abuurka ah. Ugu dambeyntii, waxaa jira qaabab kale oo spam ah oo ujeeddadoodu tahay in la isku duro furin toos on our casriga ah.
Mowduuca la xiriira: Telegram vs WhatsApp, kee fiican?
Khayaanada lagu sameeyo WhatsApp maaha wax cusub. Dhab ahaantii, way jireen tan iyo isla markiiba codsigu noqday mid caan ah oo isticmaalkiisu ku faafay adduunka oo dhan. Suurtagal maaha in la helo khiyaamo iyo khiyaamo cusub si ay u muuqdaan, laakiin waxa gacmaheena ku jira waa ogaanshaha waxa ay yihiin oo aan ogaano sida aan nafteena u ilaalin lahayn. Kuwaasi waa qaar ka mid ah Virus-yada ugu halista badan ee naga soo gaari kara WhatsApp-ka:
Dahabka WhatsApp. Nooca premium ee app-ka ee la filayo in la soo dejisan karo adigoo gujinaya isku xirka.
GhostCrtl. Dabin loogu talagalay kuwa aan fiiro lahayn ee isku daya inay WhatsApp ka soo dejiyaan bogagga aan rasmiga ahayn. Barnaamijkan waxa uu iska dhigayaa WhatsApp, laakiin marka la rakibo waxa uu xado dhammaan macluumaadka ku jira talefanka.
Boostada codka waa la waayay, kaas oo nagu soo gala xiriirinta "ka soo kabashada".
Muddada tijaabada Aad uga taxaddar haddii aad hesho fariintan oo leh waa inaad gujisaa linkiga ku lifaaqan si aad u sii wadato isticmaalka WhatsApp.
raffle iPhone. Waxaa jira qaar badan oo qaniinay, oo lagu tijaabiyay fikradda ah helitaanka iPhone kaliya adigoo gujinaya xiriirka la socda fariinta. "Abaalmarinta" ayaa nasiib darro ah mid aad uga duwan sidii la filayay.
Laakin xitaa haddii spamka aan helno uusan ku lug lahayn khiyaano (inkasta oo tani ay adag tahay in la ogaado), helitaanka xayeysiis aan loo baahnayn runtii waxay noqon kartaa xanaaq. Tani kaliya waa sabab ku filan in la raadiyo habab lagu xannibo spam.
Sida loo aqoonsado spamka WhatsApp?
Nasiib wanaag, haddii aan fiiro gaar ah u leenahay, waxaan heli karnaa qaar Calaamadaha fariimaha aan helno ee nooga digaya inaan la tacaaleyno kiis spam ama wax ka sii daran:
Marka fariimaha ku jiraan naxwaha xun iyo khaladaadka higaada.
Haddii aan helno a fariin ka timid shisheeye
Goormay yihiin farriimaha la filayo inay WhatsApp noo soo diraan (wax shirkadani waligeed ma samayso).
Marka fariintu nagu casuunto guji xiriiriye
Haddii ay tahay a codsiga xogta shakhsiyeed ama macluumaadka lacag bixinta.
Haddii, inkastoo dhammaan taxaddarrada, aad ku dhacday dabinka oo aad aaminsan tahay in laguu geystay khiyaano, waxa ugu horreeya ee aad sameyneyso waa inaad la xiriirto bangigaaga si aad u tirtirto kaararka deynta oo aad tirtirto furaha bangiga ama aad hesho mid cusub. Dabcan, WhatsApp waa in sidoo kale la ogeysiiyaa oo, haddii loo baahdo, u gudbiso cabasho habboon booliiska.
Ka jooji spamka WhatsApp
Markaan waxaas oo dhan sheegay, weli way wanaagsan tahay in laga hortago. Aan aragno sida aad u xannibi karto ama uga saari karto spam WhatsApp taleefanka Android, iOS iyo abka desktop:
Kuwani waa tillaabooyinka la raacayo si loo xannibo farriimaha spamka ee WhatsApp haddii aan haysanno casriga Android.
Waxaan fureynaa WhatsApp iyada oo loo marayo icon-ka laga helay shaashadda guriga ama liiska codsiyada.
Marka xigta, waxaan dooranaa tab "Wada sheekeyso".
Kadibna waxaan helnaa wada hadalka isticmaalaha kaas oo fariinta shakigu ku timid oo fur.
Wadahadalka dhexdiisa, waxaan riixeynaa astaanta saddexda dhibcood ee ku yaal geeska sare ee midig.
Halkaa waxaan ku dooranaynaa ikhtiyaarka "Dheer" ka dibna ikhtiyaarka "Warbixin".
Sanduuq ayaa soo muuqan doona oo ku weydiin doona haddii aad rabto inaad xaqiijiso warbixinta isticmaalaha WhatsApp. Waan cadaadin doonaa "Xaqiiji".
Tallaabooyinkan ka dib, ma awoodno inaan xannibno xiriirka oo keliya oo aan tirtirno fariimaha sheekeysiga, laakiin sidoo kale waxaan u gudbin doonnaa lambarka shakiga ah WhatsApp, si ay tallaabo uga qaado arrintan.
Waxa kale oo suurtogal ah in la soo sheego xisaabta isticmaale looga shakisan yahay inuu yahay spamer ama ka sii xun iPhone. Habka ayaa aad ula mid ah Android. Sidan ayaad u samaynaysaa:
Marka hore, waxaan bilaabeynaa whatsapp adigoo gujinaya astaanta laga helay shaashadda guriga.
Kadibna waxaan riixnaa astaanta "sheeko", kaas oo lagu soo bandhigay bar hoose.
Waanu raadinaa oo helnaa wada hadalka ay ku jirto fariinta la tuhunsan yahay
Guji magacaaga si aad u gasho macluumaadka xiriirka.
Marka tabkan cusubi furmo, waxaanu raadinaa oo guji ikhtiyaarka "Xidhiidhka Warbixinta", taas oo aan ku yeelan doono laba ikhtiyaar oo cusub:
Jooji oo warbixin.
Ugu dambeyntii, waxaynu aragnaa sida isticmaaluhu loogu soo wargelin karo ama looga xannibi karo codsiga desktop WhatsApp ee Windows iyo MacOS, ama shabakadda WhatsApp. Habka la raacayo waa isku mid dhammaan saddexda xaaladood:
Si aad u bilawdo, waa inaad bilawdaa Codsiga WhatsApp iyada oo loo marayo sumadda u dhiganta ee miiska ( galaaska WhatsApp Web, waa inaad si fudud u gasho shabakadeeda rasmiga ah).
Markaad gasho, waxaan gujineynaa wadahadalka meesha fariinta spam ay ku taal.
Marka xigta waa inaad gujisaa saddex dhibic icon toosan ee shabakada WhatsApp (Windows waxay ku yaalliin si toos ah, halka MacOS ay tahay saddex xagal rogan). Had iyo jeer waxay ku taal geeska bidix ee sare.
Kadib, menu-ka furmaya, waxaanu dooranaa shayga «Macluumaadka xiriirka".
Ka mid ah walxaha kala duwan ee muuqda, waxaan dooraneynaa "Xidhiidhka Warbixinta". Sida kiiskii hore, waxaan yeelan doonaa laba ikhtiyaar: «Block and Report», ama si fudud «Warbixin».
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Sida looga saaro spamka WhatsApp